Faaliye Isu Faalin Garan Waayey.
Monday April 15, 2019 - 16:57:28 in Articles by Hadhwanaag News
Waxa jirey nin faaliye ah oo dadka u faalin jirey , ugana warama waxa ay la kulmi doonaan mustaqbalka
Waxa jirey nin faaliye ah oo dadka u faalin jirey , ugana warama waxa ay la kulmi doonaan mustaqbalka iyo aayahooda danbe ,lacag badana wuu kaga qaadi jirey beenta uu u sheegaayo Isaga oo ka faa iidaysanaaya jaahilnimadooda iyo garaad yaraantooda awgeed .
Maalinmaalmaha ka mid ah , ayaa qaxa u yimi nin , waxa uu ku yidhi :gurigaagii waa la jabsadey ,waanu albaab la yahey , wixii yaalayna waa la gurtay , oo shay lagagama tegin .
Faaliyihii intuu si degdeg ah isu taagey oo aad iyo aadna u cadhoodey oo samada ka qayliyey ayuu xaggii gurigiisii u dhaqaaqey , siduu u soo eego waxa gurigiisii ku dhacay .
Nin baa meel halkaas ah kala socdey faaliyaha , arimahan loo sheegaayona ka maqlaayrey , kalana socdey . Markaasaa waxa uu faaliyii ku yidhi : waxaad ka warantaa waxa dadka ku dhici doona iyo waxa ay la kulmi doonaan , laakiin adiga waxa kugu dhici doona iyo waxaad la kulmi doontid midna kama warheysid , waanad ogaan weydey waxa kugu dhacay, hadaba muxuu faalkaagu adiga wax kuugu sheegi waayey ?
Hadaba waxa jira dad (koox) ka waranta waxa ay ku sameyn doonaan cidda kale , laakiin kama war hayaan mana ka war qabaan waxa iyagu la kulmi doonaan .
wax ma fahantay